Kubata Slips - 802Quits
musha » Vermonters » KUGARA » Kubata Slips
Kurega kusvuta, kuputa kana imwe fodya zvakafanana nekudzidza hunyanzvi-sekutamba basketball kana kutyaira mota. Chinhu chakanyanya kukosha kuita kudzidzira - nekuti pese paunoyedza kurega, unodzidza chimwe chinhu chitsva. Ndosaka kuedza kwese kuverengwa. Ita shuwa kuti iwe unozvipa iwe pachako chikwereti chese basa rauri kuita kurega. Usakanganwa, kana iwe uchida imwe shoma rubatsiro kuti urambe uchirega, 802Quits inopa yakagadzirirwa rubatsiro nefoni (1-800-QUIT-NOW), uri-munhu uye online.
Dzimwe nguva, kunyangwe hazvo chinangwa chiri chekurega zvachose, unogona kutsvedza. Zvese kutsvedza zvinoreva kuti iwe unoda imwe tsika yekudzidzira kubata imwe mamiriro ezvinhu. Chinokosha ndechekuti dzokera munzira uye usarega slip yacho ichikupinza munzira. Ndokwomuzvarirwo kunzwa pasi kana kuva nemifungo yakashata pamusoro pechishuwo chefodya kana kutsvedza. Gadzirira izvi, uye usarega manzwiro asina kunaka achikukonzera kuti udzokere pakuputa, kuputa kana imwe fodya.
Yeuka: Chitsvedzo kungotsvedza chete. Izvo hazvireve kuti uri fodya, vaper kana mushandisi wefodya zvakare. Kugara usina fodya kunowanzo kuve kwakaoma. Tevedza nhanho idzi kukubatsira iwe kuramba uchisiya. Kana iwe ukadzokazve, yeuka, vanhu vazhinji vanotsvedza! Funga nezvekusvika kwako parwendo urwu kune hupenyu husina fodya iyo inokupa iwe rusununguko rwekunakidzwa nezvimwe zvinhu. Ingo dzokera "munzira."
Usambofa wakakanganwa zvikonzero zvako zvekurega.
Usatore kunyange "kungodhonzera kamwe" kweimwe fodya kana "chingori 1 chew" yefodya yekutsenga kana "1 vape-hit".
Usareverere uye funga kuti unogona kuve neumwe chete.
Ronga mamiriro ezvinhu ane njodzi (kufinhwa, kunwa doro, kunetseka) uye sarudza zvauchaita pane kushandisa fodya.
Zvipe mubayiro nekuda kwekusashandisa fodya. Shandisa mari yaunochengetedza kubva pakusatenga fodya kana zvimwe zvigadzirwa pane chimwe chinhu chine musoro kwauri. Inogona kutokura kunge mota yakamboshandiswa, nekuti paketi imwe yefodya pazuva inogona kuita madhora zviuru zvitatu pagore.
Kudada nekuedza kurega kushandisa fodya uye kuudza vamwe nyaya yako.
Tanga kuzvifunga semunhu asingasvuti, asina fodya.